2022 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး CBD အရေပြားနှင့် ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှု ထုတ်ကုန်များ - shopgiejo.com
မကြာသေးမီက၊ CBD သည် ကျန်းမာရေးလောကတွင် ရွှေစံနှုန်းဖြစ်လာသည်။ CBD ဖြင့် ရောထားသော သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့် ထုတ်ကုန်တိုင်းနီးပါးကို ရှာတွေ့နိုင်သည် — အဖျော်ယမကာများ၊ ဂမ်မီများ၊ ဆီများနှင့် vape တို့ကို သင်အမည်ပေးလိုက်ပါ။ သို့သော်၊ CBD သည် အလှကုန်လုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ပြောသောစကားလုံးဖြစ်လာပြီး CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအကျိုးကျေးဇူးများကို အလွန်ချီးကျူးကြသည်။ ယနေ့ဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုကာ အရေပြားပေါ်ရှိ CBD ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပြကာ အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်နှင့် ထုတ်ကုန်များကို စုစည်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် (စမ်းသပ်ပြီး စမ်းသပ်ထားသည်)။
CBD သို့မဟုတ် cannabidiol သည် ဆေးခြောက်ပင်များတွင် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်သော ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အပင်၏ အထင်ရှားဆုံး တက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်မျိုးမှာ THC ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ CBD သည်အဆိပ်မရှိသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အမှုန့်ဖြင့် ထုတ်ယူထားပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် လျှော်ဆီ၊ အုန်းသီး သို့မဟုတ် သံလွင်ကဲ့သို့ သယ်ဆောင်သည့်ဆီနှင့် ရောစပ်ကာ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အပလီကေးရှင်းကို ဖြေလျှော့ပေးသည်။
CBD Skincare ဆိုတာ ဘာလဲ
CBD သည် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသော တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ CBD ပါ၀င်သော အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်များသည် အရေပြားမှတဆင့်စုပ်ယူနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏အကြီးဆုံးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို အာဟာရဖြစ်စေရန်၊ ပြန်လည်နုပျိုစေကာ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးသည်။ လျှော်ပင်ထုတ်ယူမှုသည် အရေပြားအတွက် ဤအကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းရန် polyphenols နှင့် fatty acids တို့နှင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့အပြင် CBD သည် အဆီပြန်သောအသားအရည်ကို ထိန်းညှိရန်၊ ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် အရေးအကြောင်းများနှင့် ဝက်ခြံကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
သင့်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပုံမှန်အစီအစဉ်တွင် အဘယ်ကြောင့် CBD ထည့်သင့်သနည်း။
ခန္ဓာကိုယ်သည် CBD မော်လီကျူးကို လက်ခံရရှိရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု ယုတ္တိရှိပုံရသည်။ ထို့အပြင် ဒြပ်ပေါင်းသည် အလားအလာရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ သင့်အရေပြားအတွက် CBD က ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲလို့ တွေးနေသေးတယ်ဆိုရင် CBD က အရေပြားကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲဆိုတာကို ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
CBD တွင် ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိပြီး ၎င်းသည် ဝက်ခြံကဲ့သို့ ရောင်ရမ်းမှု အခြေအနေများကို ကုသရန် ထိရောက်သော ပါဝင်ပစ္စည်း ဖြစ်စေသည်။ ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးရုံသာမက အဆီထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို ထိန်းညှိပေးပြီး ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမှာပါ။ ထို့အပြင် CBD မျက်နှာထုတ်ကုန်များသည် ချွေးပေါက်များကို လျော့ပါးစေပြီး တောက်ပသောအသားအရေကို ရရှိစေပါသည်။
CBD သည် အခြားသော ရောင်ရမ်းနေသော အရေပြားအခြေအနေများကို ကုသပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည် rosacea ကြောင့်ဖြစ်သော ရောင်ရမ်းမှုကို ငြိမ်သက်စေရန် သို့မဟုတ် သင်၏ atopic dermatitis ကို ထိန်းချုပ်လိုပါက၊ CBD မျက်နှာလိမ်းခရင်မ် သို့မဟုတ် သွေးရည်ကြည်ကို သင်၏နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ CBD-ထည့်သွင်းထားသော ထုတ်ကုန်များသည် ၎င်းတို့၏ ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် နှင်းခူနှင့် psoriasis ကဲ့သို့သော အခြားအရေပြားအခြေအနေများအတွက် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။
CBD သည် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
Cannabidiol သည် အစွမ်းထက်သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အရေပြားကို လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ မီးခိုးနှင့် နေရောင်ကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရင်းများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အရေပြားကို ပျော့ပျောင်းစေပြီး ရေဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးကာ ချောမွေ့သောလိုင်းများ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် အရောင်ပြောင်းခြင်းတို့ကို လျော့နည်းစေသည်။
အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ဘယ်လို CBD ရေနံက အကျိုးပြုသလဲ။
CBD မျက်နှာထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ တင်းကြပ်စွာအကြံပြုထားသည့် CBD အာရုံစူးစိုက်မှု မရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အာနိသင်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် မီလီဂရမ်ဖြင့် တိုင်းတာပြီး ထုတ်ကုန်၏ အထုပ်တွင် ပြထားသည်။ သင်ကုသသည့်အခြေအနေ ပိုပြင်းထန်လေ၊ အဆီပိုပြင်းလေ ဖြစ်သင့်သည်ကို သတိရပါ။ ထို့အပြင်၊ ထုတ်ကုန်များတွင် THC ၏တရားဝင် 0.3% ထက်ပိုမပါဝင်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံး CBD အသားအရေထိန်းထုတ်လုပ်သူများကိုသာ ရှာဖွေပါ။
CBD ကို အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပုံမှန်အစီအစဉ်တွင် မည်သို့ပေါင်းစပ်မည်နည်း။
CBD-ထည့်သွင်းထားသော အလှကုန်ပစ္စည်းများသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် လာပါသည် — အစိုဓာတ်ထိန်းဆေး၊ သွေးရည်ကြည်၊ သန့်စင်ဆေးများ၊ ဖြန်းဆေးများနှင့် မျက်နှာဖုံးများ၊ ၎င်းတို့ကို သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ထည့်သွင်းသည့်အခါ၊ ရေပေါ်မတက်မိရန် အရေးကြီးသည်။ ဒီမှာ ယေဘူယျ စည်းကမ်းက ပိုနည်းတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်သည်အခြားအသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ CBD ထုတ်ကုန်များကိုသုံးသင့်သည်။ အပလီကေးရှင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပြီး သင့်အရေပြားက ၎င်းကို မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး CBD အလှကုန်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်နည်း
ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင်အသုံးပြုလိုတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ CBD လိမ်းဆေးများနှင့် မျက်နှာဆေးခြင်းမှ CBD မျက်နှာအဆီများနှင့် သွေးရည်ကြည်များအထိ ဖြစ်နိုင်ချေသည် အဆုံးမရှိပေ။ ထို့နောက် အမျိုးအစားကို စဉ်းစားပါ။ CBD ရေနံ ထုတ်ကုန်တွင်ပါရှိသော။
CBD ထုတ်ကုန်များသည် full-spectrum CBD ရေနံ၊ သီးခြား CBD သို့မဟုတ် ကျယ်ပြန့်သော spectrum CBD ရေနံကို အသုံးပြုသည်။ Full-spectrum ဆီတွင် THC ၏ 0.3% ထက်နည်းသော အထောက်အကူဒြပ်ပေါင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ Broad-spectrum CBD ရေနံသည် THC မှလွဲ၍ cannabinoids အားလုံးပါဝင်သောကြောင့် ဆင်တူသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ CBD isolate သည် CBD ၏အသန့်ရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပြီး အကူအညီအစီအစဥ်တွင်ပါရှိသော အခြားဒြပ်ပေါင်းများမှ ကင်းစင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သန့်စင်သော CBD မျက်နှာထုတ်ကုန်အတွက် အကောင်းဆုံးပုံစံလည်းဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် ချွေးပေါက်များကိုပိတ်ဆို့မည်မဟုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စဉ်းစားတာက ထုတ်ကုန်ရဲ့ အာနိသင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် psoriasis ကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောအရေပြားအခြေအနေများကိုကုသရန်ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုနေပါက၊ ထုတ်ကုန်ထိရောက်မှုရှိရန်အတွက် CBD ၏အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုမြင့်မားသင့်သည်။
အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုအတွက် CBD တရားဝင်လား။
လျှော်ပင်မှရရှိသောထုတ်ကုန်အားလုံးသည် 2018 လယ်ယာဥပဒေမူကြမ်းအတည်ပြုပြီးကတည်းက US တွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဆေးခြောက်မှရရှိသော ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ပြည်နယ်များတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများရှိသည်။ အများစုတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးခြောက်ပရိုဂရမ်ရှိပြီး ပြည်နယ် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကလည်း အပန်းဖြေရန်အတွက် ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းသည် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် တရားမဝင်သော ပစ္စည်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေသောကြောင့် မဝယ်မီ သင့်ကိုယ်သင် အသိပေးရန် သေချာပါစေ။
ယခုစမ်းကြည့်ရန် အကောင်းဆုံး CBD အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်
သင့်အား အကောင်းဆုံးသော ပစ္စည်းများကို ယူဆောင်လာစေရန် ထုတ်ကုန် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းတဝါးဝါး စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ အစွမ်းသတ္တိ၊ ထိရောက်မှု၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် အခြေခံ၍ စမ်းသပ်ပြီး အတည်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ပြင်ပမှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ပေးဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများသာ ပါဝင်ပါသည်။
2017 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, JustCBD အကောင်းဆုံး CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုကုမ္ပဏီကိုရှာဖွေသောအခါ မလွဲမသွေပေါ်လာလိမ့်မည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ CBD ၏ကုသနိုင်သောစွမ်းအားများကိုစားသုံးသူများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာယူဆောင်လာရန်ဖြစ်သည်။ JustCBD ထုတ်ကုန်များအားလုံးသည် အော်ရီဂွန် သို့မဟုတ် Wisconsin မှရရှိသော လျှော်ပင်မှရရှိသော US မှထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးအတွက် ပြင်ပမှဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ အသုံးပြုထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် ဓာတုကင်းစင်ပြီး GMO နှင့် COA များကို JustCBD ၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
CBD Body Lotion - ရှားစောင်းလက်ပတ်
JustCBD ၏ ခန္ဓာကိုယ်ဆေးရည်ကို CBD အာရုံစူးစိုက်မှု ရွေးချယ်စရာ သုံးခုဖြစ်သည့် - 125mg၊ 250mg နှင့် 1,000mg။ ရှားစောင်းလက်ပတ် အသားအရည်ကို အာဟာရဖြည့်တင်းရန်၊ ပျော့ပျောင်းစေပြီး နုပျိုစေသော အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အရေပြားအနာကျက်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးတာကြောင့် ဒီ lotion က နေပူခံပြီး ဒါမှမဟုတ် နေလောင်ခံရတဲ့အခါ လိမ်းဖို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သူ့ရဲ့ texture က ပေါ့ပါးပြီး အဆီပြန်တာကို မကျန်အောင် နှစ်သက်ပါတယ်။ ထို့အပြင် lotion သည် ချက်ခြင်းနီးပါး စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် သင့်အဝတ်အစားများပေါ်တွင် အစွန်းအထင်းများ ကျန်ရစ်မည်ကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
CBD Body Lotion - စတော်ဘယ်ရီရှန်ပိန်
JustCBD စတော်ဘယ်ရီ ရှန်ပိန် CBD ခန္ဓာကိုယ်လိမ်းဆေး
စွဲလမ်းစေသော CBD body lotion ကိုလိုချင်ပါက၊ ဒါပါပဲ။ ဟိ စတော်ဘယ်ရီ ရှန်ပိန် အနံ့သည် သင့်အား သကြားလုံးကဲ့သို့ အနံ့ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် ဒီ lotion က အနံ့ကောင်းရုံသာမကဘဲ အသားအရေကို စိုပြေစေပြီး နူးညံ့စေပါတယ် ။ သင့်အသားအရေကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရေဓာတ်ထိန်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖော်မြူလာသည် အဆီမပြန်ဘဲ၊ ပက်ကေ့ဂျ်သည် အသုံးပြုရန် ရိုးရှင်းပါသည်။
အိမ်သုံး spa အတွက် စံပြ၊ JustCBD အနှိပ်ဆီ လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်သော ချောမွေ့ပြီး အဆီပြန်ခြင်းမရှိသော ဖော်မြူလာရှိသည်။ ၎င်းတွင် ရေဓာတ်ပိုမိုရရှိစေရန်အတွက် CBD isolate နှင့် နေကြာဆီတို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် အဆီတွင် သစ်ကြံပိုးခေါက်၊ မဲဇလီဖူး၊ ငရုတ်သီး၊ ဂျင်းတို့နှင့် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး နွေးထွေးသောခံစားမှုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ သစ်ကြံပိုးခေါက်ရနံ့သည် ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းပြီး ချက်ခြင်း ပြေလျော့စေပါသည်။ ကြွက်သားတွေ နာကျင်တာကို ကုသရင် လိုချင်တဲ့နေရာကို တစ်နေ့ ၂-၃ ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေလျော့စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အိပ်ရာမ၀င်ခင် တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်လောက် အသုံးပြုပေးပါ။
မဟုတ်ဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Zain နဲ့ Graham တို့ဟာ လူတွေကို ကွဲပြားစေတဲ့အရာအားလုံးကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှင်းလျှောစီးခြင်းသည်ပင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကွဲပြားစေမည်မဟုတ်ကြောင်း သူတို့ယုံကြည်ကြသည် — အမှန်တော့၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို တူညီစေသည်။ ဒီယုံကြည်ချက်မှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က No, Thank You ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်သည် လူများကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကောင်းကောင်းခံစားရစေပြီး ၎င်းတို့မလိုအပ်တော့သမျှအတွက် "မဟုတ်ဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ဟုပြောရန် ကူညီပေးသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။
ညအတွက် CBD မျက်နှာဖုံး
နက်ရှိုင်းသော omotes ရေဓါတ်
မဟုတ်ပါ၊ ကျေးဇူးပါ Face Mask
ကိုးရီးယား နှင့် ဂျပန် အလှတရားများဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသည်။ မျက်နှာဖုံး အကာအရံအလွှာတစ်ခုဖန်တီးရန် အုန်းရေအခြေခံဖြင့် ဖော်စပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အမှတ်တံဆိပ်၏ အမှတ်အသားဖြစ်သော ရောင်စဉ်တန်းပြည့် CBD ၏ 50mg နှင့် အစွမ်းထက်သော niacinamide နှင့် sodium hyaluronate ပေါင်းစပ်မှုပါရှိသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ အရေပြားကို ရေဓာတ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းထားပေးရင်း ဆဲလ်တွေကို အကာအကွယ်ပေးပြီး ပျက်စီးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဂရုတစိုက် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Manuka ပျားရည်က ရေဓာတ်ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
မဟုတ်ဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် — နှုတ်ခမ်းအတွက် CBD လိမ်းဆေး
No, Thank You ထံမှ lip balm
အဆိုပါ No, Thank You ထံမှ lip balm နှုတ်ခမ်းသားကို အစိုဓာတ်ထိန်းထားရန် အတားအဆီးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည့် ထူးခြားသောကာကွယ်မှုပုံစံတစ်ခုပါရှိသည်။ full-spectrum CBD အပြင်၊ lip balm တွင် cocoa butter ဖြင့် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ခရင်မ်အသားအရည်နှင့် အသားအရည်ကို ကာကွယ်ပေးသော၊ ငါတို့ချစ်တယ်!
Jihi မိသားစုပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး စိတ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်တို့ကို အာဟာရဖြည့်တင်းခြင်း၊ ပြန်လည်နုပျိုခြင်းနှင့် ပြေလျော့စေသော ထိရောက်သောထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်အတော်လေးအသစ်ဖြစ်သော်လည်း Jihi ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်မှာနှစ်နှစ်ဖြစ်သည်။
Camellia အစေ့ဆီဖြင့် သီးသန့်ဖော်မြူလာ
ဗီတာမင် C နှင့် Niacinamide ကြွယ်ဝသည်။
အဆိုပါ Rejuvenating Face serum ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် CBD နှင့် hyaluronic အက်ဆစ် 250mg ဖြင့်ဖော်စပ်ထားသည်။ ပေါင်းစပ်ဖော်မြူလာသည် အရေးအကြောင်းများနှင့် မျဉ်းကြောင်းများကို လျော့ပါးစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အသားအရေကို ပြန်လည်နုပျိုစေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ serum သည် ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး နှင်းလျှောစီးခြင်းကို သက်သာစေပြီး လန်းဆန်းစေပါသည်။ ဗီတာမင်တွေ ကြွယ်ဝတဲ့ Camellia seed oil က ဝက်ခြံပေါက်တတ်တဲ့ အသားအရေအတွက် အထူးကောင်းမွန်စေတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြထားတဲ့အတိုင်း ဝက်ခြံပေါက်တတ်တဲ့ အသားအရေအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ Jihi အမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။.
ထူထဲသော်လည်း ချောမွေ့သော texture
အဆိုပါ ကြွယ်ဝပြီး soothing body balm ကြွက်သားနှင့် အဆစ်များ သက်သာလာစေရန် အော်ဂဲနစ် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဗာလစံစေးအခြေခံသည် 500mg CBD isolate နှင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့် အာဟာရဖြစ်စေရန်အတွက် အဆီ 19 ခုရှိသည်။ Merriment ၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းမှာ Camellia seed oil ဖြစ်ပြီး omega fatty acids ကြွယ်ဝပြီး နီမြန်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဗာလစံစေးတွင် အထင်ကြီးလောက်သော ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ပါရှိသည်။ နက်ရှိုင်းသောရေဓါတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။နာကျင်မှုကို မြန်ဆန်စွာ သက်သာစေပါတယ်။
“အစ” သို့မဟုတ် “အရင်” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ရှေ့မှာ Continuum of Beauty ၏ဖခင် ဒေါက်တာ Julius Few မှ တည်ထောင်ထားသော CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် — ခွဲစိတ်မှုနှင့် ခွဲစိတ်မှုမဟုတ်သော ပေါင်းစပ်ကုသမှုများဖြင့် သဘာဝအတိုင်းကြည့်နိုင်သော ရလဒ်များရရှိရန် အလှအပဆိုင်ရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Afore သည် ရိုးရှင်းသော အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပုံမှန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အရည်အသွေးမြင့် အလှအပဖော်မြူလာများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ၎င်း၏ လေးဖက်မြင် အလှအပချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြုထားသည်။ ဆောင်ပုဒ်အောက်မှာ "သဘာဝအလှတရားတွေကို မင်းရဲ့အစ၊” ထုတ်ကုန်များသည် နေရောင်ခြည်ဒဏ်၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုဒဏ်မှ အသားအရေကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် ရည်ရွယ်သည်။
CBD nanoemulsion 100mg
မမှီ Effusive Face Mist ၊
ရွှန်းရွှန်း 100mg CBD nano-emulsion ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာအမှုန်အမွှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နယ်ပယ်တွင် ရှေ့ဆောင်တစ်ဦး၊ အခိုးအငွေ့သည် ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော CBD ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများနှင့် အပင်ထုတ်ယူမှုများ ကြွယ်ဝသည်။ အမှုန်အမွှားတွင်ပါရှိသော ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများသည် အရေပြားကို တည်ငြိမ်စေရန် လက်ဖက်စိမ်း၊ ဗီတာမင် C နှင့် witch hazel တို့နှင့် ညီညွတ်စွာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အလွန်ပေါ့ပါးပြီး ချက်ခြင်း အေးမြမှုနှင့် တောက်ပမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ Sensitive အမျိုးအစား အပါအဝင် အသားအရေ အမျိုးအစားတိုင်းအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး နီမြန်းတာကို သိသိသာသာ သက်သာစေပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ 2017 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော အမျိုးသမီးများ တည်ထောင်ထားသော CBD ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင်၊ အမှတ်တံဆိပ်သည် သန့်ရှင်းသော vaping အတွက် ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဟု ယူဆပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း TribeTokes သည် သန့်ရှင်းသော၊ ဘေးကင်းပြီး သန့်စင်သော CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်များနှင့် ၎င်း၏အစုစုကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ CBD gummies. သူတို့ရဲ့ လမ်းညွှန်မူနဲ့ ဖြစ်တည်နေတယ်။ “ကိုယ့်အမေ ဒါမှမဟုတ် ညီမကို မပေးမယ့် ကုန်ပစ္စည်းကို ဘယ်တော့မှ မရောင်းပါနဲ့” TribeTokes သည် ယခုအခါတွင် အရည်အသွေးမြင့် CBD ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်သည့် စျေးကွက်တွင် နာမည်ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ TriBeauty ဆိုးဆေး CBD၊ နှင်းဆီပေါင်းခံ၊ အော်ဂဲနစ်အစိမ်းရောင်နှင့် အဖြူရောင်လက်ဖက်ရည်၊ နှင့် Hyaluronic Acid၊ အော်ဂဲနစ် Goji Fruit Extract တို့ပါရှိသည်။ အရေပြား၏ ရေဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးကာ ချွေးပေါက်များ ၏ အသွင်အပြင်ကို လျော့နည်းစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ အသားအရေကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေပြီး စိုပြေစေပါတယ်။ နှင်းဆီရနံ့ကို ကြိုက်တယ်။ အလွန်သိမ်မွေ့ပြီး လန်းဆန်းသည်။ Toner လိမ်းပြီးရင် မျက်နှာလေးက သန့်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာ ခံစားရတယ်။
သန့်ရှင်းသော သဘာဝ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ Amsterdam တွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိသော CBD အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ CBD နှင့် လျှော်ပင်၏ အခြားသော အရည်အသွေးမြင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ကုမ္ပဏီသည် မျိုးဆက်သစ် ကျန်းမာရေး ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်များတွင် စျေးကွက်တွင် သင်ရှာတွေ့နိုင်သော အခြား CBD ထုတ်ကုန်များထက် CBD အစိတ်အပိုင်းများ ပိုမိုပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် သဘာဝအဆီများ၊ အာဟာရဓာတ်များ၊ ဗီတာမင်များနှင့် phytocannabinoids များကြွယ်ဝစွာပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် entourage effect ကို အာမခံပါသည်။
ချောမွတ်ပြီး အဆီမပြန်သော အသွင်အပြင်
ငါတို့လက်ထက်မှာ အတည်ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်း Pure Natur အမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။, အ Pure Natur Skin Restoring Cream 100% သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြီး အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ခရင်မ်သည် မတူညီသော အရေပြားပြဿနာများကို ကုသရန် ရည်ရွယ်သည်။ ယားယံခြင်း၊ ယားယံခြင်း သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသော အရေပြားပေါ်တွင် လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသည်။ ခရင်မ်၏အခြေခံသည် အော်ဂဲနစ်ရှယ်ယာထောပတ်၊ အုန်းဆီနှင့် candelilla ဖယောင်းတို့ဖြစ်သည်။ CBD အပြင်၊ ၎င်းသည်ချိုမြိန်သောဗာဒံဆီ၊ ဂျိုဂျိုဘာဆီ၊ chamomile လက်ဖက်ရည်ဆီ၊ calendula ဆီနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် glycerin တို့နှင့်ကြွယ်ဝသည်။
Wren & Co. အတော်လေးသစ်လွင်သော CBD အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ လူတိုင်းအား အဆင့်မြင့် CBD ထုတ်ကုန်များကို ကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးသည် သန့်ရှင်းပြီး ဘေးကင်းကြောင်း သေချာစေရန် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ တီထွင်စမ်းသပ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်လိုင်းတွင် အဆီ၊ ခရင်မ်နှင့် သွားဖုံးများ ပါဝင်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကျန်းမာစေပါသည်။
CBD ၏ 400mg
အဆိုပါ Wren & Co. ခရင်မ် ပုလင်းတစ်လုံးလျှင် 400mg CBD ထုပ်ပိုးထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် menthol နှင့် Sichuan ငရုတ်ကောင်းထုတ်ယူမှုတို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန်နှင့် ထုံကျင်စေသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ချက်ချင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ခရင်မ်သည် ချောမွေ့သော texture ရှိပြီး အရေပြားပေါ်တွင် အမှန်တကယ် ဇိမ်ရှိစေပါသည်။ ထို့ထက်မက၊ ထင်းရှူးနှင့် palo santo ၏ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အနံ့ကို ကျွန်တော် နှစ်သက်မိပါသည်။ နောက်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့ package ကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ La Creme သည် ဒေါ်လာ 50 ကုန်ကျပြီး ၎င်းသည် ပေးဆောင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ တတ်နိုင်လှသည်။
လယ်သမားနှင့် ဓာတုဗေဒပညာရှင် အမျိုးအစားများစွာဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် CBD ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ပြင်းထန်သော ဖော်မြူလာသည် သင့်အား မည်သည့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက်မဆို သင့်လျော်သောကုသမှုကိုရရှိရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဆေးဝါးပညာရှင်များနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များက တည်ဆောက်ထားသော ကုမ္ပဏီသည် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကျွမ်းကျင်သောအကူအညီကို ပေးဆောင်သည်။
CBD မျက်နှာဖုံး - လူငယ်မြှင့်တင်ရေး
ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် CBD CBD ဆီ
CBD မျက်နှာဖုံး — လူငယ်မြှင့်တင်ရေး
လူငယ်မြှင့်တင်ရေး cellulose CBD မျက်နှာဖုံးသည် ရေဓာတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သင့်ကို လန်းဆန်းစေသည်။ သင်၏ အနားယူခြင်းဆိုင်ရာ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော Mask သည် သင့်အသားအရေကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပြီး ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ Mask Your Boost တွင် အမြင့်ဆုံးပြန်လည်ရှင်သန်မှုအတွက် Farmer & Chemist ၏ PCR-ကြွယ်ဝသောဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသော ကျယ်ပြန့်သောရောင်စဉ်ဆီပါရှိသည်။ မည်သည့်အသားအရေအမျိုးအစားနှင့်မဆို သင့်တော်သည်၊ ဤ mask မှပေးဆောင်သော အဓိက CBD အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအကျိုးကျေးဇူးများသည် မယုံနိုင်လောက်အောင်ပင်။ သန့်စင်ထားတဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းပေးရပါမယ်။ Toner လည်း လိမ်းလို့ရပေမယ့် မသုံးဘဲ စမ်းကြည့်ပါတယ်။ Mask ကို မိနစ် 30 လောက်ထားပြီး ဖယ်ရှားပြီးတာနဲ့ Serum ကို မျက်နှာကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။ တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ် Mask ကိုသုံးပြီး ထူးခြားတဲ့ စိတ်အပန်းဖြေတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရခဲ့တယ်။
ကျန်းမာသောအမြစ် Hemp စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး CBD ထုတ်ကုန်များကိုပံ့ပိုးပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်ပြီးလည်ပတ်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ကုမ္ပဏီသည် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော အပိုပစ္စည်းများကို အပိုထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက် မူပိုင်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်က ၎င်းတို့ကို မျှဝေခဲ့သည်။ "ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အရည်အသွေးသေချာစေရန် သေးငယ်သောအသုတ်များကို ဖန်တီးနိုင်စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်တိုင်း၏ အသုတ်တိုင်းကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ သီးခြားလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။"
CBD-ထည့်သွင်းထားသော ခန္ဓာကိုယ်ဆပ်ပြာ - Nag Champa
CBD ၏ 100mg
ကျန်းမာသောအမြစ်များ Nag Champa ဆပ်ပြာဘား
အဆိုပါ Nag Champa ဆပ်ပြာတုံး Healthy Roots သည် ၎င်း၏နံ့သာဖြူရနံ့ဖြင့် သင့်ကို အံ့အားသင့်စေမည်ဖြစ်သည်။ ခိုင်ခံ့ပြီး မြေဆီလွှာ၊ အနံ့လေးက ပြေလျော့ပြီး သက်သာစေပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် ဓာတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဆိုးဆေးများမပါဝင်ဘဲ သဘာဝအတိုင်း ရရှိနိုင်သော အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အရောင်ရှိသည်။ 100mg CBD-ထည့်ထားသော ဆပ်ပြာဘားသည် နေ့စဉ်အသုံးပြုရန် ပြီးပြည့်စုံသည်။ အသားအရေကို အာဟာရဖြည့်ပေးပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။
Deep Relief CBD Body Lotion - 200mg
ကျန်းမာသောအမြစ်များ နက်ရှိုင်းသောကယ်ဆယ်ရေး CBD ကိုယ်ခန္ဓာ Lotion
အဆိုပါ နက်ရှိုင်းသောကယ်ဆယ်ရေး CBD ဆေးရည် CBD ၏ 200mg ပါဝင်ပြီး ရှားစောင်းလက်ပတ်အရွက်ဖျော်ရည်၊ witch hazel ရေ၊ ဗီတာမင် E နှင့် သခွားသီးဖရုံဆီတို့ဖြင့် ကြွယ်ဝသည်။ ထုတ်ကုန်သည် အိုမင်းရင့်ရော်မှုနှင့် ဝက်ခြံများကို တားဆီးရန်၊ ရောင်ရမ်းနေသော မျက်လုံးများကို လျှော့ချရန်နှင့် အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကို သက်သာစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ပန့်ဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်းသည် အသုံးပြုရအလွန်အဆင်ပြေပြီး ရိုးရှင်းပါသည်။ texture က ချောမွေ့ပြီး lotion က အဆီမပြန်သလို လေးလံမှုလည်း မရှိပါဘူး။ လန်းဆန်းစေမယ့် သခွားသီးနဲ့ အစိမ်းရောင် အရွက်တွေရဲ့ ရနံ့က သစ်သီးပျားရည်နဲ့ ရောထားတဲ့ အနံ့လေးက သင့်အသားအရေကို လန်းဆန်းစေမှာပါ။
နက်ရှိုင်းစွာပြန်လည်သက်တမ်းတိုး CBD မျက်နှာဆီ
ကျန်းမာသောအမြစ်များ CBD မျက်နှာဆီ
17ml CBD မျက်နှာဆီ သင့်နေ့စဉ် အလှအပရေးရာမှာ မရှိမဖြစ် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတွင် CBD ဆီ 100 မီလီဂရမ် ပါဝင်ပြီး လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်ပြီး အဆီမပြန်ဘဲ ချောမွေ့သော texture ပါရှိသည်။ ခြောက်သွေ့သော အရေပြားအကွက်များ၊ ဝက်ခြံများနှင့် အရေးအကြောင်းများကို ကုသရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်မျက်လုံးအောက်ကို ညစ်ညမ်းစေသည် — နောက်နေ့တွင် ထူးခြားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုမိပါသည်။ ပုလင်းတစ်ခုလုံးကို သုံးပြီးနောက် သိသာထင်ရှားတဲ့ ခြားနားချက်တစ်ခု ပေါ်လာပါတယ် - အသားအရေကို နူးညံ့ပြီး တောက်ပစေတယ်လို့ အားလုံးက သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
မြစ်ကို ပြုစုခြင်း။ ခေတ်မီလူများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အလှပြင်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Scandinavian အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် မုတ်ဆိတ်မွေးနှင့် မျက်နှာစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း တတ်နိုင်လောက်သော ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်ရန် အာရုံစိုက်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အဆိုပါ ဒိန်းမတ်သစ်တောမုတ်ဆိတ်ဆီ မုတ်ဆိတ်မွှေးကို ကုသရန်အတွက် 100% သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ။ မုတ်ဆိတ်မွေးကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးပြီး အသားအရေကို အာဟာရဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ မှုတ်သွင်းထားသော အဆီသည် အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး မုတ်ဆိတ်မွေး ယားယံခြင်းကို သက်သာစေသည်။ လာဗင်ဒါနှင့် လိမ္မော်ရနံ့တို့ကြောင့် လန်းဆန်းစေပြီး နေ့စဉ်အသုံးပြုရန် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
ထိပ်တန်း CBD ဆံပင်စောင့်ရှောက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများ
CBD သည် ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှုဂိမ်းတွင် နောက်ထပ်အကြီးစားအရာဖြစ်သည်။ အလှပြင်လုပ်ငန်းမှာ အဓိက လူကြိုက်များအောင် ဖန်တီးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ CBD ခေါင်းလျှော်ရည်မှ အအေးခံစက်များနှင့် အဆီများအထိ၊ CBD သည် ဆံပင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။
CBD ဆီသည် ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်နှင့် ပရိုတင်းဓာတ်များ ကြွယ်ဝသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည် ဆံသားကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးပြီး ဆံသားကြီးထွားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ဆံပင်ကို ပိုထူပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် CBD ထုတ်ကုန်များသည် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပြီး ပါးလွှာသောဆံပင်ကို တိုးတက်စေသည်။
CBD ဆီတွင် ဖော့စဖရပ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် ဗီတာမင် E တို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဆံပင်ဦးရေပြားအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ CBD သည် ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိပြီး ၎င်းသည် folliculitis၊ eczema သို့မဟုတ် psoriasis ကဲ့သို့သော ဦးရေပြားအခြေအနေအချို့ကို ကူညီပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ CBD ဆီသည် သဘာဝဆီဘမ်ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းညှိပေးသောကြောင့် ခြောက်သွေ့သော၊ အဆီပြန်သော နှင့် ပုံမှန်ဆံပင်အမျိုးအစားများအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။
CBD ဆီတွင် မွေးညင်းပေါက်များနှင့် ဦးရေပြားအခြေအနေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် အစွမ်းထက်သော အစိုဓာတ်ထိန်းဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် ဆံပင်ပျော့ပြောင်းမှု၊ ထုထည်နှင့် တောက်ပြောင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ နောက်ထပ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ ဆံသားရဲ့ သဘာဝအသွင်အပြင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ကွဲအက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
2022 ခုနှစ်အတွက် ထိပ်တန်းဆံပင်စောင့်ရှောက်မှု CBD ထုတ်ကုန်များ
Wellphoria အလှအပ လေစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ရေအသုံးပြုမှုနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း လျှော့ချရေး ကဲ့သို့သော ရေရှည်တည်တံ့သော အလေ့အကျင့်များကို အသုံးပြုသည့် အမေရိကန်အခြေစိုက် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်အရ၊ "ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ အပင်အခြေခံ 99% Pure CBD နှင့် Hemp Seed Oil တို့ ရောစပ်ပြီး ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး အဓိက ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များနှင့် အိုမီဂါဖက်တီးအက်ဆစ်များကဲ့သို့ အာဟာရဓာတ်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဆံသားကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုကာ ဦးရေပြားကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ နှစ်မျိုးလုံးသည် ဆံပင်ကြီးထွားမှုအတွက် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ကျန် 1% ၏ 99% သည် Pure CBD သည် micro cannabinoids၊ terpenes၊ waxes နှင့် resins ကဲ့သို့သော အကြွင်းအကျန်များကို တွက်ချက်ပါသည်။"
Wellphoria CBD ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြားဆီ
အဆိုပါ CBD ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြားဆီ Wellphoria မှ 50% သန့်စင်သော CBD နှင့် လျှော်စေ့ဆီ 99ppm ဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းသည် ဦးရေပြားကို မျှတစေပြီး အံ့သြဖွယ်အေးစက်မှုနှင့် တောက်ပမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ နှစ်ပတ်ဆက်တိုက်အသုံးပြုပြီးနောက် သင့်ဆံပင်သည် ပိုမိုပျော့ပျောင်းပြီး သန်စွမ်းလာသည်ကို သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ စမ်းသပ်ချိန်အတွင်း ဆံပင်ကွဲအက်မှု သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားသည်။ အရာအားလုံး၏ထိပ်တွင်, ထုတ်ကုန်များအံ့သြဖွယ်အနံ့။ peony၊ citrus၊ gardenia၊ geranium၊ နှင့် cedarwood တို့၏ လတ်ဆတ်သောရနံ့ကို ငါနှစ်သက်သည်။
အာဟာရဖြစ်စေသော CBD ခေါင်းလျှော်ရည်
ဆံသားကို ပျော့ပျောင်းစေပြီး သန်စွမ်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
Wellphoria CBD-ထည့်သွင်းထားသော ခေါင်းလျှော်ရည်
လတ်ဆတ်ပြီး မြေကြီးဆန်သော မှတ်စုများဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသည်။ အာဟာရရှိသော CBD ခေါင်းလျှော်ရည် ဘုရား၏အနံ့။ ထို့အပြင် ရနံ့သည် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခံပါသည်။ vegan ဖော်မြူလာသည် ဆံသားကို နက်ရှိုင်းစွာ သန့်စင်စေပြီး ပျော့ပျောင်းပြီး သန်မာစေပါသည်။ ဒါ့အပြင် မျှတတဲ့ ဦးရေပြားကို ဖန်တီးပေးပြီး ကျန်းမာတဲ့ တောက်ပမှုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း ဆံပင်ကို ဖြီးသည့်အခါ ကွဲပြားမှုများကိုလည်း သတိပြုမိပါသည်။ အလွယ်တကူ ရှုပ်ပွပြီး ချောမွေ့ခဲ့သည်။ ဆံပင်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် ဗောက်များကို ဖယ်ရှားရန်လည်း ကူညီပေးသည်။
Wellphoria CBD-ထည့်သွင်းထားသော ဆံပင်အေးစက်
အဆိုပါ CBD ဆံပင်အေးစက် အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်။ ဆံသားသည် တောက်ပြောင်ပြီး ပျော့ပျောင်းပြီး ကျန်းမာသော ရုပ်ရည်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန် ခေါင်းလျှော်ရည်ပြီးနောက် အသုံးပြုသောအခါတွင် ကွန်ဒိုသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စိုစွတ်သောဆံပင်ပေါ် လိမ်းပြီး ရေမဆေးခင် နှစ်မိနစ်ခန့် စောင့်ပါ။ vegan ဖော်မြူလာသည် ဆံသားကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဦးရေပြားကို မျှတစေသည်။
အထူးကြပ်မတ် CBD_ထည့်သွင်းထားသော ကုသမှု Masque
Wellphoria CBD-ထည့်သွင်းထားသော ကုသမှု Masque
အဆိုပါ ကုသမှုမျက်နှာဖုံး တစ်ပတ်ကို အကြိမ်အနည်းငယ်သုံးရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဆံပင်ကို သန့်စင်ပြီး စိုစွတ်နေစေဖို့ Masque ကို လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ ငါးမိနစ်လောက်ထားပြီးမှ ရေဆေးချလိုက်ပါ။ ၎င်းသည် ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် conditioner တို့ကို ဖြည့်စွက်ပေးကာ ဆံသားကို နူးညံ့ပျော့ပြောင်းစေပါသည်။ ဆံသားအမျိုးအစားအားလုံးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဆံကေသာအာဟာရအတွက် အခုထွက်ရှိလာတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ။
ကွမ်းခြံကုန်း Dan Hodgdon မှ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကြီးထွားမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် သဘာဝ၏ အလုံးစုံသော ချဉ်းကပ်မှုပုံစံများကို စံပြခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်အတွက် အစပြုသည့်အချက်မှာ မြက်ခင်းပြင်များကဲ့သို့ Dan ၏ နားလည်သဘောပေါက်မှုမှာ ပတ်ဝန်းကျင်က ကျန်းမာနေချိန်တွင် ဆံပင်များ ပေါက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ကျန်းမာသောဆံပင်ကြီးထွားမှုနှင့် စောင့်ရှောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် CBD ထုတ်ကုန်များ အပြည့်အစုံပါဝင်ရန် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်လိုင်းကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ လှပသောဆံကေသာကိုပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် မည်သူမျှ ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးကို အလျှော့မပေးသင့်ဟူသော ခံယူချက်အပေါ်အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီသည် ဆက်လက်ရှင်သန်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထားတာ တစ်ခုရှိတယ်။ အမှတ်တံဆိပ်သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားထားသော Veagmour ၏ထုတ်ကုန်များ၏ ပေါ်လွင်ချက်များဖြစ်သည်။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကောင်းမွန်သည်။
မူပိုင် b-SILK Karmatin ပါရှိပါတယ်။
တမူထူးခြားသော ရုက္ခဗေဒဖော်မြူလာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဖြည့်စွက်ခေါင်းလျှော်ရည် အရေပြားဆဲလ်သေများ၊ ဆီဗမ်၊ ချွေးနှင့် ထုတ်ကုန်အကြွင်းအကျန်များအပါအဝင် အခြားအညစ်အကြေးများကို သန့်စင်ပေးသည်။ ထို့အပြင် CBD သည် ဦးရေပြား၏မျက်နှာပြင်အောက်သို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး ယားယံခြင်းကို သက်သာစေရန်၊ ဆံပင်ကြီးထွားမှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် မွေးညင်းပေါက်များကို အားကောင်းစေပါသည်။ ထို့အပြင် ခေါင်းလျှော်ရည်သည် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသော DHT ဟော်မုန်း၏ အာနိသင်ကို ဟန့်တားပေးသည်။
ဇင့် PCA နှင့် vegan ပိုးထည်များဖြင့် သီးသန့်ဖော်မြူလာ
ဆံသားကို လန်းဆန်းစေပြီး အာဟာရဖြစ်စေပါတယ်။
အဆိုပါ detoxifying serum ဦးရေပြားကို ကုသပေးပြီး dermal microbiome ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သည်။ ဇင့် PCA နှင့် vegan ပိုးသတ်ဆေးတို့ပါရှိသော ဖော်မြူလာသည် အပြည့်အ၀ CBD နှင့် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဦးရေပြားကို အေးဆေးစေပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားများနှင့် အခြားအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ serum သည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ပေးသော အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဤအကာအကွယ်အလွှာသည် အစိုဓာတ်ကို သော့ခတ်ထားကြောင်း သေချာစေသည်။
ဆံပင်ကို အပူဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးတယ်။
အဆိုပါ အေးစက် သင်ယခုအချိန်အထိအသုံးပြုဖူးသောအခြားနှင့်မတူပါ။ ၎င်း၏ texture သည် ထူသော်လည်း အလွန်ပေါ့ပါးပြီး ပိုးဝင်သည်ဟု ခံစားရသည်။ ထို့အပြင်၊ conditioner သည် ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု၊ အပူရှိန်ပုံစံပြုလုပ်ခြင်း နှင့် combing တို့ကိုပင် ကြာရှည်စွာကာကွယ်ပေးသည်ဟု ဆိုထားသည်။
စက်ဝိုင်းအပြည့် လျှော်ပင် The Hemp Federation Ireland, Full Circle ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးသည် ပြင်ပကုမ္ပဏီဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်ထားပြီး ISO90001 လက်မှတ်ရရှိထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အမှတ်အသားထုတ်ကုန်များသည် ရောင်စဉ်အပြည့် CBD ရေနံကျဆင်းမှုများဖြစ်သည်။အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံး ပရီမီယံ လျှော်ပင်ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ cannabinoids၊ CBDa၊ terpenes နှင့် လျှော်ပင်၏ အခြားသော အကျိုးပြုဒြပ်ပေါင်းများစွာကို ထိန်းသိမ်းပြီး ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။"
Castor Seed Oil နှင့် Calendula Flower Extract တို့ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါသည်။
full-spectrum CBD ၏ 1,000mg
အပြည့်အဝစက်ဝိုင်း ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြား CBD ဆီ
အဆိုပါ ဆံပင်နှင့်ဦးရေပြား CBD ဆီ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အဆီများ ပေါများသည်။ ကြက်ဆူဆီ၊ နေကြာဆီ၊ ဂျိုဂျိုဘာ၊ နှင်းဆီမာရီ၊ လာဗင်ဒါတို့နဲ့ ဖော်စပ်ထားတာကြောင့် ဗောက်တွေကို လျော့ပါးစေပြီး ဆံသားကို အာဟာရဖြစ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဦးရေပြားထဲသို့ အဆီအနည်းငယ်ကို နှိပ်နယ်ပေးရန်လိုအပ်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း တိုးတက်မှု၏ ပထမဆုံးလက္ခဏာကို သတိပြုမိမည်ဖြစ်သည်။ အဆီသည် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်ကြီးထွားမှုကို ဆွဲဆောင်ရန် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးရေးရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီပေးခဲ့ကြသော အောက်ဖော်ပြပါ ပံ့ပိုးကူညီသူများကို ကျေးဇူးတင်လိုပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိုက်ဖက်သော ပလပ်ဖောင်း SmartMoneyMatch
Affor The Effusive
Healthy Roots Hemp ခန္ဓာကိုယ်ဆပ်ပြာ
Heathy Roots လူငယ်မြှင့်တင်ရေး
စစ်မှန်သော သိပ္ပံနည်းကျ စပါးပင်ဆီ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် 2022